SIDINA AN’HABAKABAKA TSARADIA : Niverin-dàlana nampihorohoro
Tera-kovitra ireo mpandeha niaraka tamin’ny sidina Tsaradia nampitohy an’Antananarivo sy Sambava ny alahady 2 desambra lasa teo. 5 décembre 2018
Araka ny fampitam-vaovao tamina mpandeha iray tamin’io zotra io fa efa nisy fahatarana adiny iray ny fiaingana. Tsy vitan’izany fa raha nikasa ny hiainga dia tafajanona tampoka, ka voatery nosintomina tamin’ny fiara.
Nisy araka izany ny asa fanamboarana nataon’ny teknisianina tamin’ity fiaramanidina ity, taorian’ izany dia mbola afaka niainga ihany. Efa niainga tao anatin’ny adiny iray sy telo minitra araka ny voalaza hatrany ilay fiaramanidina, izay 27 minitra tsy ahatongavana ao Sambava dia nilaza ny mpanamory fa tsy maintsy hiverin-dalana any Antananarivo indray ilay fiaramanidina. Fantatra mantsy ao anatin’ny adiny iray sy sasany ny anaovana ny sidina avy ao Antananarivo mankao Sambava.Ny zava-misy anefa dia naverina any Antananarivo izay atao ao anatin’ny adiny iray indray ilay fiaramanidina.
Araka izany dia nihorohoro, vaky tahotra ireo mpandeha tao anatiny, anisan’izany ny depiote iray voafidy tao Sambava. Araka ny voalaza hatrany fa tamin’ io andro io ihany dia niteraka olana tahaka izay nahazo io sidina nankao Sambava io ny fiaramanidina Tsaradia manao zotra nankany amin’ny Nosy La Réunion. Nialamboetry araka izany ny teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato.
Niteraka tahotra ho an’ireo mpandeha ny sidina, ary niteraka resabe, fa ilaina fanamboarana sy fanaraha-maso ireo fiaramanidina miasa eto amintsika mba hisorohana amin’ny loza.